लासको मूल्य - Fitkauli
नौजना पनि किन भन्या ? एकजना पनि मरेनन् भन्देको भए हुन्थ्यो । जो पत्ता लगाउन जान्थ्यो, उसैलाई मारिदिए कसले थाहा पाउँथ्यो ?
अनुवाद : आर.सी. रिजाल
बैलाडिलामा मजदुरमाथि गोली चल्यो । मजदुरहरू दरबन्दी कटौतीको विरोधमा आन्दोलन गरिरहेका थिए । पैंतालीस दिनदेखि उनीहरू शान्तिपूणर् आन्दोलन गरिरहेका थिए । यत्रो दिनसम्मको शान्तिपूणर् आन्दोलन न खानीको अधिकारीहरूलाई राम्रो लागिरहेथ्यो न सरकारलाई, न त प्रहरीलाई नै ।
दुईचार दिनको शान्तिपूणर् आन्दोलन राम्रै हुन्छ । पैंतालीस दिनसम्मको धैर्य गरेर बसिरहन्छ । अब भगवान्को कृपाले गोली चलाउने शुभअवसर मिल्नेछ । आखिर हार खाएर अधिकारीहरूले एकदिन शान्तिपूणर् आन्दोलनलाई अशान्तिपूणर् बनाए ।
बिचराहरू कहिलेसम्म बन्दुक बोकेर पर्खिरहनु ? प्रहरीले आइमाईमाथि लठ्ठी बर्सायो । उनीहरू काँडेतारमा अल्झेर फाटेको साडी, फाटेको चोलो, अर्धनग्न अवस्थामा आफ्नो झुपडीमा लोग्नेको सामुन्ने पुगे । लोग्नेमान्छेले स्वास्नी मान्छेलाई अर्धनग्न देखे ।
जो शान्तिपूर्ण थियो, त्यो अब अशान्तिपूणर् भयो । अफिसरहरूको मनोकामना पूरा भयो । प्रहरीले बन्दुकमा गोली भरे । भगवान्ले सबैको सुन्छन् । भगवान्को राज्यमा ढिलो त हुन्छ तर न्याय हुन्छ ।
मध्यप्रदेशका मुख्यमन्त्रीले यस्तो शान्ति र प्रसन्नताले बयान दिए, मानौं सप्तचण्डी यज्ञको सफलतापछि वक्तव्य दिइरहेछन् । उनी भन्छन्- “जम्मा नौ व्यक्ति प्रहरीको गोलीले मारिए ।”
एकजनाले भने- “नौ हैन, सयौं मरेका छन् ।” मुख्यमन्त्रीले ती मारिएकाहरू काङ्ग्रेसी देखे । अर्कोले भन्यो “मलाई टेलिग्राम आएको छ, पाँच सय मजदुर मारिएका छन् ।”
मुख्यमन्त्रीले चित्र खिचे- अँ, मोतीलाल बोरा हुन्, यी काङ्ग्रेस आईका हुन् । तेस्रोले भन्यो- “धेरैको ज्यान गएको छ । तथ्य लुकाइँदै छ ।” मुख्यमन्त्रीलाई लाग्यो हुनत जनता पार्टीका हुन् तर मोरो समाजवादी पाटीको हो ।
त्यही रघु ठाकुरले भड्काएको हो ।
मुख्यमन्त्रीले आफ्ना जनसङ्घी साथीहरूतर्फ हेरे । उनी आँखाको इसाराले भन्दै थिए ए सखलेचा। तेरो बुद्धि के कालो टोपी मै रहिरह्यो । नौजना पनि किन भन्या ? एकजना पनि मरेनन् भन्देको भए हुन्थ्यो । जो पत्ता लगाउन जान्थ्यो, उसैलाई मारिदिए कसले थाहा पाउँथ्यो ? अब मुख्यमन्त्रीले मर्नेहरूको हिसाब गरे, एकदम व्यापारीले जस्तै । हत्याको मूल्य तोकिदिए । हेर भाइ, तिम्रो आलुको यति पैसा भयो, भान्टाको यति र गोलभेंडाको यति । न भूलचुक न लिनुदिनु ।
जो मन्यो उसको परिवारलाईपाँच हजार दिने । जो धेरै घाइते भएर अस्पताल भर्ना भएको छ उसलाई एक हजार दिने । जसलाई सामान्य चोटपटक लागेको छ, उसलाई दुई सय पचास दिने भइगयो हिसाब राफसाफ ।
यता गोलीकाण्डमा परेका परिवारका श्रीमतीहरू यस्तो कुरा गर्छन्- “मेरो त भाग्य नै फुटयो । मेरो लोग्नेलाई मामुली चोटपटक लागेको छ, दुईसय पचासमात्र पाउँछु । तिमी त भाग्यमानी रहिछघौ, तिम्रो लोग्ने मन्यो, तिमीले पाँच हजार पाउँछयौ । मेरो लोग्ने त सुरुदेखि नै बिनाकामको हो । यो चमेलीको श्रीमान् पनि ठीकै छ । उनको लोग्ने अस्पताल भर्ना भएको छ, एक हजार रुपैयाँ त पाउँछिन् । मेरो लोग्नेबाट त यति पनि भएन ।”
सरकारले मर्नेहरूको परिवारको मनोबल कति माथि उठाइदियो । मानिस रोटीको बदला गोली खान तयार छन् । सरकारको लागि पनि रोटीभन्दा गोली सस्तो पर्छ । त्यसैले रोटीको बदला गोली सप्लाई गर्छ ।
सखलेचा भन्छ- “मजदुरलाई भड्काउन बङ्गालबाट मान्छे आएका थिए । सायद ज्योति बसुले पठाएको होला । सब कम्युनिस्टको बदमासी हो । भोका मान्छेलाई यिनै कम्युनिस्टले भोको छस् भन्दिन्छन् । नत्र हाम्रा सिधासाधा मजदुरलाई उनीहरू भोको भएको कुरा के चाहा ।”
करपुरी ठाकुर भन्छन्- चार हरिजन (अछुत मारिए। मुख्य मन्त्रीले भने- “ठीक हो, सरकारले उनीहरूलाई मारेको त हैन नि । जमिनदारले मारे। हामीले त्यसको भुक्तानी किन गर्ने ? होस्, म त उदार मुख्यमन्त्री हुँ । हामी हरेक मरेका परिवारलाई दुई हजार दिन्द्री सरकारले रेट धेरै घटाएको छ ।” सरकार सामानको मूल्य कम गर्न कटिबद्ध छ । हामीले मान्छेको मूल्य धेरै घटाइदियो । जनता सरकारको यो सबभन्दा ठूलो सफलता हो । प्याजको भाउ चाहे बढोस तर हामी मान्छेको मूल्य कुनै हालतमा पनि बढ्न दिँदैनौं ।
चेन्ना रेड्डी भन्छन्- “हैदरावादमा जे भयो त्यो नक्सलवादीले गराएका हुन् । रामनरेश यादव भन्छन्- “काङ्ग्रेस आईले गराएको हो ।”
तीनवटा पर्दा छ- काङ्ग्रेस आई, कम्युनिस्ट, र नक्सलवादी अक्षमता, अपराध, र अकर्मण्यताबाट जब मुख्यमन्त्रीको अनुहार विकृत भएर ब्वाँसोजस्तो हुन्छ, तब ऊ काङ्ग्रेस आई, कम्युनिस्ट या नक्सलवादीको पर्दाभित्र आफ्नो घिनलाग्दो अनुहार लुकाउँछ ।
जनतालाई लाग्यो यो मुख्यमन्त्रीसँग अब काम माग्न सकिन्न, रोटी माग्न सकिन्न, तलब माग्न सकिन्न, न्याय माग्न सकिन्न । योसँग अब एउटै माग मात्रै गर्न सकिन्छ त्यो हो मर्ने मान्छेको मूल्य बढाउने पाँच हजार एकदम कम हुन्छ । सबै चिजको मूल्य बढेको छ, मान्छेको पनि मूल्य बढाइयोस् ।
सात हजार गरिदिनोस् हजुर हामी शुद्ध मान्छे सप्लाई गछौं मिसावट हुँदैन । जति चाहिन्छ त्यति नै सामान सप्लाई गछौँ । तपाईं जति चाहनुहुन्छ त्यति मान्छे मार्नोस् । मुआब्जा बढाउने माग लिएर आन्दोलन होस् । हेरौं गोलीकाण्डपछि एकएक मान्छेको पाँच हजार दिन्छन् कि सात हजार ।
हाम्रो कठोर गृहमन्त्रीलाई मान्छेसँग मतलब नै छैन । उनले मान्छेलाई सङ्ख्यामा गन्त चालेका छन् । हामी भन्छौं- “गोली चलाउनाले मान्छे मरे ।” गृहमन्त्रीको लागि सङ्ख्या मर्छ । हामी सम्झन्छौं- हरिजन (अद्भुत जलाइए । गृहमन्त्री मान्छन्- हरिजन हैन सङ्ख्या जलाइयो ।
गृहमन्त्री हरेक पटक सङ्ख्या जोडेर भन्छन्- “हेर, यो आनन्दमय वसन्त ऋतुमा काङ्ग्रेस आईको पालामा एक सय सतहत्तर मान्छे मारिएका थिए । हाम्रो पालामा यस ऋतुमा एक सय चालीस मान्छे मात्र मारिए। अर्थात् इन्दिरा गान्धीको सिजन फलदायी रह्यो, हाम्रोमा केही कमी नै भयो ।”
म चाहन्छु- गृहमन्त्रीले आफ्नो विभागको मागका साथ संसद्बाट अरू ३७ जना गोलीले मानें मञ्जुरी लियोस् र छिटो सङ्ख्या पूरा गर्नू भनेर राज्य सरकारलाई सर्कुलर पठाओस् । हरिजन जलाउने मामलामा पनि काङ्ग्रेस आईको सिजनभन्दा चरणसिंहको सिजन कम उपलब्धिपूणर् भएको छ । त्यसैले उच्च जात वा भूमिपतिलाई भन्दिनू- “सङ्ख्या पूरा गर ।”
‘भोलारामको आत्मा’ बाट
हरिशंकर परसाईं प्रकाशित मिति : वैशाख १६, २०७९
खाडल मात्रै रहनेछन्
हरिशंकर परसाईं का थप सामग्री
दुई जुत्ताको कथा
अतिथिकक्षमा प्रतीक्षाको घडी